Fifandonana tany Analavory Jiolahy telo matin’ny zandary
Teny an-dalana hanafika an’Analavory ireo jiolahy 7 no voasakan’ny zandary. Dibo-kafaliana ireo mponina nahita ny fatin’ireo saika hanao fahirano azy.
Lehilahy iray zanaka mpivarotena ao Analavory taloha ihany no mpitarika ireo olon-dratsy saika hanafika teo an-toerana. Ny alatsinainy 1 jolay, tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro dia nahazo vaovao tamin’olona tsara sitrapo ny paositry ny zandarimaria Analavory fa misy jiolahy 7 miomana hanafika ho ao Analavory ary efa miandry fiara ao Ampizarantany, Tsiroanomandidy. Nidina nisava ny fiara avy hatrany teny Amparihivato-Analavory ny zandary nisava ny fiara rehetra avy any Tsiroanomandidy. Tamin’ny 5 ora sy sasany hariva, voasakana ny fiara Toyota taksibrosy nandehanan'izy ireo. Vao nahatazana ny zandary ry zalahy dia nitsambikina sy nitsoaka teo amin’ny varavaram-pitaratra ny telo lahy ary nanapoaka basy sy nitifitra avy hatrany an'ireo zandary. Nampitandrina sy nampijanona ny mpitandro filaminana saingy vao mainka nanao tifitra variraraka izy ireo. Raikitra ny fifanenjehana sy fifampitifirana. Vokany, jiolahy 3 no lavo tsy tra-drano niaraka tamin’ny basy miisa 3 ka vita gasy ny 2 ary revolver ny 1, ary “poignards” 5 , mohara 5 ary bala maromaro. Jiolahy 4 azo sambo-belona.
Nankasitraka koa ny manampahefana
Nanao short avokoa ireo jiolahy ary efa ao anaty sakaosin'izy ireo avokoa ny akanjo hisoloany sy ny pataloha jean hanaovany rehefa avy mahavita ny asa ratsiny. Horakora-pifaliana sy fankasitrahana no nandraisan'ny vahoakan'Analavory ny mpitandro filaminana ny alatsinainy hariva raha nanatitra ireo fatin-dahalo tao amin’ny CSB II Analavory. Tazomina ao biraon’ny zandary ireo sisa tsy maty miandry ny fanolorana azy ireo eny amin’ny fitsarana. Nankasitraka sy nisaotra ny mpitandro filaminana ihany koa ny mpitondra sy ny vahoaka ao an-toerana.